Soo-saaraha fiilada heerkulka sare ee Shiinaha
Hoyga > Alaabada > Xarkaha > Xarig heerkulka sareeya
waxaan siineynaa fiilada AFRPF tayo sare leh withUL TUV SGS oo shahaado leh. waxaan nafteena u hurnay fiilooyinka iyo silig soo saarista sanado badan, oo daboolaya inta badan Yurub iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono lamaanahaaga muddada dheer ee Shiinaha.AFRPF cable 1. Hordhaca Wax soo saarka ee xarigga AFRPF AFRPF dahaaran ......
waxaan siineynaa fiilada AFRP tayo sare leh withUL TUV SGS oo shahaado leh. waxaan nafteena u hurnay fiilooyinka iyo silig soo saarista sanado badan, oo daboolaya inta badan Yurub iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono lammaanahaaga muddada dheer ee china.AFRP cable 1. Hordhaca wax soo saarka ee fiilada AFRP AFRP dahaaran waa ......
waxaan siineynaa FEP cable tayo sare leh withUL TUV SGS oo shahaado leh. waxaan nafteena u hurnay fiilooyinka iyo silig soo saarista sanado badan, oo daboolaya inta badan Yurub iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono lammaanahaaga muddada dheer ee Shiinaha.FEP cable 1. Hordhaca Waxsoosaarka feylka FEP ee dahaaran FEP waa exce ......
waxaan siineynaa PFA cable tayo sare leh withUL TUV SGS oo shahaado leh. waxaan nafteena u hurnay fiilooyinka iyo silig soo saarista sanado badan, oo daboolaya inta badan Yurub iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono lammaanahaaga muddada dheer ee Shiinaha.PFA cable 1. Wax soo saarka Hordhaca xarigga PFA ee PFA dahaaran waa exce ......
Waxaan ku siineynaa AFR cable tayo sare leh UL TUV SGS oo shahaado leh. Waxaan nafteena u hurnay soo saarista fiilada iyo fiilooyinka sanado badan, anagoo daboolayna inta badan Yurub iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga mustaqbalka fog ee Shiinaha.
Waxaan ku siineynaa PTFE PFA FEP cable tayo sare leh oo leh UL TUV SGS oo shahaado leh. Waxaan nafteena u hurnay soo saarista fiilada iyo fiilooyinka sanado badan, anagoo daboolayna inta badan Yurub iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga mustaqbalka fog ee Shiinaha.
Testeck waa mid ka mid ah kuwa ugu xirfada badan Xarig heerkulka sareeya soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha. Fadlan xor ayaad u tahay inaad iibsato tayo sare leh Xarig heerkulka sareeya kaydka halkan oo ka hel xigasho warshaddeena. Sidoo kale, adeeg qaas ah ayaa la heli karaa.